गद्यरचनाको अक्षर यात्रा
काठमाडाैं | बैशाख १८, २०७८
साहित्यिक क्षेत्रमा चिरपरिचित नाम हो हरिअधिकारी । नेपाली साहित्यको आकाशमा सिद्धहस्त लेखक मानिन्छन् उनी । कुशल पत्रकार समेत रहेका हरि दाइ कुशल अखबारी लेखक पनि हुन् ।
रसिलो र धितमर्दा हुन्छन् उनका राजनीतिक टिप्पणी । लेख, निबन्ध, प्रबन्ध, कथा, कविता, आख्यान सबैतिर उत्तिकै रेसमा छन् उनका कलम । नेपाली लेखक, साहित्यकारमाझ छुट्टै पहिचान छ उनको । शब्द भण्डार उनको विशेषता हो भने तिनका लालित्यपूर्ण संयोजन खुबी ।
लर्तरो लगन, साधना र अभ्यास विना सम्भव नै हुँदैन यस्तो तर उनका लागि भने बायाँ हातका खेल मानिन्छन् यी सबै । यति सजिलै नयाँ–नयाँ शब्द प्रयोग गरी रचनामा मिठास भर्छन् कि लाग्छ जादूगर नै हुन् शब्दका मामिलामा, शब्द खेलाउने मामिलामा । कुन ठाउँमा कुन शब्द प्रयोग गर्दा पाठक लठ्ठिन्छन् भन्ने उनलाई राम्रै थाहा छ । त्यसैले त सदाबहार राखेका छन्, राख्न सकेका छन्, राख्न सफल भएका छन् चिरन्तन पाठकलाई ।
एउटै व्यक्तिको पनि कतै आलोचना र कतै प्रशंसा भेटिन्छन् उनका कलममा । कतिलाई लाग्दो हो यस्तो विरोधाभाष किन ? तर यो विरोधाभाष होइन, यसैमा छिपेको छ उनको विशेषता । व्यक्ति आफैंमा पूर्ण पनि हुन्न र राम्रो नराम्रो पनि हुन्न, यी सबै उसले गरेको काममा भर पर्ने कुरा हो भन्ने कुुुुरा राम्रै थाहा छ उनलाई । थाहा छ र त निर्धक्क गर्ने गर्छन् त्यस्तै टिप्पणी । यसैलाई कसैले रुखो र खरो देख्छ भने त्यो उसको दृष्टिदोष हो । उनका लागि भने दोष होइन गुण हो यो । कुशादेवी काभ्रेका मध्यमवर्गीय अधिकारी ब्राह्मण पुत्रलाई हरि अधिकारी बनाएको छ यसैले नै ।
‘संकलित गद्यरचना’ नामक पुस्तक हालै प्रकाशित भएको छ उनको । विभिन्न समयमा लेखिएका र कतै प्रकाशित भइसकेका (पत्रपत्रिकामा, हुन सक्छ पुस्तकमै पनि) निबन्ध, प्रबन्ध समावेश छन् यसमा । शीर्षकले नै प्रस्ट पार्छ यो यस्तै किसिमको पुस्तक हो भन्ने । केही निकै पहिले प्रकाशित भएका र केही हालैका दिनहरूमा प्रकाशित निबन्ध, प्रबन्ध पर्छन् यिनमा ।
लेखन शैलीमा भने पहिले र अहिले निकै परिवर्तन भएका छन्, गरेका छन् उनले । विक्रमको ५० को दशकदेखि नै पढ्दै आएको हुँ उनलाई । शुरूमा जुन शैलीमा देखिन्थे अहिले आएर हेर्दा लाग्छ पाठकका प्रिय साहित्यकार हरि अधिकारी एउटै हुन् कि अलग छन् तर हुन् उनी एउटै ।
जवानीको जोशमा जति क्लिष्ट लाग्थे उमेर छिप्पिँदै गएपछि उति नै सरल, सरस र सुबोध हुँदै आएका छन् लेखनीका हरफहरूमा । विभिन्न समयमा लेखिएको निबन्ध, प्रबन्ध एकै स्थानमा समेट्नुको एउटा उद्देश्य आफ्नो लेखन शैलीमा आएको भिन्नता देखाउनु पनि हुनसक्छ सायद । यसको संकेत उनी आफैंले पनि गरेका छन् जस्तो लाग्छ पुस्तककै शुरूतिर कतै ।
लामा छोटा गरी कूल २३ वटा निबन्ध/प्रबन्ध समावेश छन् पुस्तकमा । सबै उत्तिकै उम्दा कोटीका लागे मलाई । एकएक नयाँ खुराक दिएका छन्, स्वाद दिएका छन्, स्वाद चखाएका छन् सबैले । त्यसैले त पढ्न शुरू गरेपछि नसकी उठ्नै मन नलाग्ने हुन पुगेको छ पुस्तक । तिनमा पनि कुनै २ वटा छान्न भनियो भने ‘हिमालको कथाः म हुँ शैलाधिराज हिमालय पर्वत’ र ‘एक नदीको कथा उसकै शब्दमा’ शीर्षकको प्रबन्ध चुन्ने पक्षमा उभिएको छु म चाहिँ ।
आफूलाई बढी मन पर्ने विषयसित सम्बन्धित भएकाले पनि त्यस्तो लागेको हुनुपर्छ सायद । करीब १ वर्षअघि मुलुकको प्रतिष्ठित एक दैनिकमा प्रकाशित भएका हुन् यी २ प्रबन्ध । त्यतिबेलै पनि धितमरुञ्जेल पढेको थिएँ मैले यिनलाई । पठ्दापढ्दै उनको अध्ययन र लेखन शैलीप्रति केही इष्र्या पनि नलागेको होइन न ढाँटी भन्नुपर्दा । पुस्तकको शीर्षक सुन्ने बित्तिकै यी र यस्तैयस्तै पूर्व पढिसकेका निबन्ध/प्रबन्ध हुनुपर्छ भन्ने लागेकाले मन पर्ने पुस्तकमा यसको पनि नाम लिएको थिएँ कुनै अनलाइन डटकममा । जबकि त्यतिबेलासम्म पुस्तक हस्तगत भइसकेकै थिएन । तथापि पुस्तकको नामले नै त्यस्तै निबन्ध/प्रबन्ध हुनुपर्छ भन्नेमा ढुक्क थिएँ ।
एकदिन फेसबूक म्यासेन्जरमा तपाईंले अमूक अनलाइनमा मेरो पुस्तकको पनि नाम लिनुभएको रहेछ, कतै मिल्छ भने समीक्षा लेखिदिनुहोला है भन्ने हरि दाइले सस्नेह सम्झना गर्नुभएको सम्झन्छु यतिबेला । अनि सम्झन्छु लेख्न त हुन्थ्यो दाइ ! तर पुस्तक पढ्नै पाएको छैन भनेको पनि । मेरो उत्तरले कस्तो प्रभाव परेछ कुन्नि लगत्तै आफ्ना सुपुत्र अंशु अधिकारीमार्फत पुस्तक हस्तगत हुने व्यवस्था मिलाइदिनुभयो उहाँले ।
पुस्तक हात पर्नासाथ तिनै निबन्ध/प्रबन्धलाई दोहोर्‍याएर पढें । आहा कति सुन्दर कहानी हाम्रा हिमालय पर्वत र नदी प्रणालीका । हिमालयको उठेको र नदी प्रणालीको धेरथोर जानकारी यसअघि पनि नभएको होइन तर हिमालको लम्बाई–चौडाई कति हो, कहाँदेखि कहाँसम्मका भूभाग समेटिएका छन् जस्ता कुरा भने कोरा ज्ञानमै सीमित थिए मेरा लागि । यसको अर्थ यसबारे जिज्ञासा नै थिएन भन्ने होइन । केही जिज्ञासा जरुर थिए तर पूर्ण जानकारी भने पाउन सकिरहेको थिइनँ ।
अहिले हरि अधिकारीको संकलित गद्यरचनाको अक्षर यात्रामा अनुद्घाटित यस्ता तमाम जिज्ञासाको उत्तर पाएँ जस्तो लागिरहेको छ । सायद अरुहरूलाई पनि यस्तै भएको हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ । यहाँका नदी प्रणाली खासगरी काली गण्डकीको कुरा पनि करीब त्यस्तै छ । यिनको उत्पत्ति कहिले, कसरी भयो, नदीको पानी कालो किन भयो, उनको गर्भमा पाइने शालिग्राम भनेको के हो, कसरी बन्यो, उनले कति रूप धारण गरिन्, कति लामो यात्रा गरी कहाँ पुगेर कुन जल प्रवाहमा समाधि लिइन्, उनका मुख्य–मुख्य सहायक नदीहरू कुन–कुन हुन् भन्ने जस्ता यावत कुराको सम्यक जानकारी दिएको छ एउटै प्रबन्धले तर सहायक नदीको कुरा गर्दा उत्तरी धादिङ जिल्लामा पर्ने गणेश हिमालबाट उत्पत्ति भई सल्यानटारको पुछारमा आएर बुढीगण्डकीमा समावेश हुने नेत्रावती नदीको नाम भने छुटेको पाएको छु । नेत्रावतीभन्दा साना र हिमालय आधार नभएका तादी आदि नदीको नाम सम्झने लेखकले हिमालयको काखबाट उत्पन्न हुने यति ठूलो नदीको नाम किन सम्झन सकेनन्, त्यसमा भने प्रस्ट हुन सकिरहेको छैन ।
यसबाहेक अन्य निबन्ध/प्रबन्धको अवस्था पनि त्यस्तै छ । नामै लिनुपर्दा भैरव अर्यालको दुःखदायी अन्त्यको कथा, प्रसंग महाकवि देवकोटाको बनारस प्रवासको, सुन्दरीजल जेलमा भट्टराईको अन्तिम डायरी आदि शीर्षकका प्रबन्ध मन परेका छन् मलाई । यसको अर्थ अन्य प्रबन्धका भूमिका कम छन् भन्ने होइन । सबैका भूमिका आ–आफ्ना स्थानमा उत्तिकै महत्त्वको छ । पुस्तकमा उनले आफूलाई ढाँटेका पनि छैनन्, बिर्सेका छैनन् देश र समाजलाई पनि ।
हाल प्रवासमा छन् उनी । कहिले फर्कन्छन् थाहा छैन, चाँडै फर्कने विचार गरेको छु भनेका थिए म्यासेन्जरमा कुरा हुँदा तर मन र मस्तिष्क भने स्वदेशकै माटोमा घुमिरहेको छर्लङ्ग पारेको छ पुस्तकले ।
केही वर्षअघि पतञ्जलि योगपीठ हरिद्वारको अवलोकन भ्रमणमा पुगेको थियो पंक्तिकार केही साथीका साथमा । भ्रमण दलमा गोरखा आयुर्वेद कम्पनीका केही जिम्मेवार पदाधिकारी पनि हुनुहुन्थ्यो । प्रसंग अनुसार आयुर्वेदीय औषधिको कुरा उठ्दा तिम्रो देशमा के छ र त्यस्तो भन्ने रुखो जवाफ फर्काएका थिए त्यहीँका एक उच्च अधिकारीले । उनको कुराले ज्यादै नमीठो गरायो हामीलाई ।
कुरो कस्तो थियो भन्नुभन्दा पनि कसले गरेका थिए भन्ने महत्त्वपूर्ण थियो त्यतिबेला । किनकि त्यस्तो कुरा गर्ने सज्जन नेपालकै भूमिपुत्र थिए, जसले पछि यहीँ आएर व्यापार–व्यवसाय बढाएका थिए, बढाइरहेका छन् । अलिकति प्रगति गर्ने बित्तिकै उत्ताउलोपन देखाउने प्रवृत्तिप्रति हरि अधिकारी जस्ता स्वदेशप्रेमी गतिलो उदाहरण हुन सक्छन् जस्तो लागेको छ ।
क्रूरता : प्रहरीलाई गाडीले ४० मिटर परसम्म घिसार्दै लगियो, भयो मृत्यु
फेरि पनि चुनाव जिती छोड्नु छ...
राजनीति एउटा यस्तो शस्त्र जसको प्रहारमा कोही कोहीलाई सुखै सुख छ कोही कोहीलाई दुखैदु:ख छ सधै दिनभर हाँस्ने बोल्ने साथी आज साथी छैनन् अर्को पार्टीका कार्यकर्ता पो त फेरि केहीलाई जसरी नी चुनाव ...
चिनियाँ लेखकको ‘एक असाधारण अन्तर्वार्ता’ मा ६ कथा
चिनियाँ लेखक लाओ माद्वारा लिखित ‘एक असाधारण अन्तर्वार्ता’ कथा संग्रह प्रकाशनमा आएको छ । युयुत्सु आरडी शर्माद्वारा अनुदित सो संग्रहमा चीनको बेजिङस्थित रेनमिन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा विश्...
लघु जलविद्युत्को टवाईनका डिजाइनर एवम् निर्माता स्वर्गीय श्यामराज प्रधानको जीवनी ‘श्यामराज प्रधान : ढुंगाको कापबाट फक्रिएको फूल’ शुक्रबार विमोचन भएको छ । पुस्तक तथा वृत्तचित्रमार्फत स्वर्गीय प्रधानको जी...
लूनकरणदास-गंगादेवी चौधरी साहित्यकला मन्दिरद्वारा तीन स्रष्टा सम्मानित
श्री लूनकरणदास–गङ्गादेवी चौधरी साहित्यकला मन्दिरले ३ जना स्रष्टालाई सम्मान गरेको छ । साहित्यकला मन्दिर स्थापनाको २८ औं वर्ष प्रवेशको अवसरमा मंगलबार(बैशाख २७ गते) काठमाण्डौको अग्रवाल सेवाकेन्द्र भवनमा आयोज...
ताराको 'म भित्रको म'
अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजकी केन्द्रीय सदस्य कवि तारा अधिकारीको कविताकृति 'म भित्रको म' सार्वजनिक गरिएको छ । नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका निवर्तमान उपकुलपति वरिष्ठ कवि डा. विष्णुविभू घिमिरेको प्रमु...
श्री लुनकरणदास–गंगादेवी चौधरी साहित्यकला मन्दिरले तीन मूर्धन्य स्रष्टालाई एक भव्य समारोहका बीच सम्मान गरेको छ । साहित्यकला मन्दिर स्थापनाको २८ औं वर्ष प्रवेशको अवसरमा मंगलबार काठमाडौको अग्रवाल सेवाकेन्...